About Sino Stainless Simbi - Huaxiao Metal Corporation Yakatemerwa
Sino Stainless Steel Corporation Limited yakagadziriswa neHuaxia yenyika dzese Simbi Corporation yakatemerwa. Sino Stainless Simbi inyanzvi yekugadzira uye kunze kwenyika ine chekuita nekusimudzira uye kugadzirwa kwesimbi isina chinhu, almuminiyamu, kabhoni simbi, GI, PPGI, uye pombi, bhawa, yekumhanyisa, uye zvimwe zvikamu zvesimbi. Hofisi yedu yemusoro iri muShanghai ine mukana wekufambisa wekufambisa. Hofisi yebazi yeHebei inogadzwa muTangshan guta. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemhando yepamusoro yemhando uye zvinokosheswa mumisika dzakasiyana siyana pasirese.
Kufukidza nzvimbo ye4,000 mativi emamirimita, isu ikozvino tine vashandi vanopfuura gumi nevashanu timu yakanangana nebasa rekunze bhizinesi, yegore rekutengesa chiyero chinodarika USD 80Milllon muna 2018, zvinopfuura 40,000 metric ton simbi zvigadzirwa zvinotumirwa kunze, uye parizvino zviri kutengesa 100% ye kugadzirwa kwedu pasi rose.
Zvivakwa zvedu zvakashongedzerwa uye kugona kwekunaka kwemhando yepamusoro pamatanho ese ekugadzira zvinotigonesa kuvimbisa kugutsikana kwevatengi. Kunze kwezvo, isu nemafekitari edu eedu takawana ISO9001, TS16949 chitupa.
Nekuda kwezvinhu zvedu zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvakanakisa basa revatengi, isu takawana wepasirese kutengesa kutengesa kunosvika kumusika wedu mukuru North America, Central neSouth America, Europe, Middle East, Asia.
Kutenda nekuona kwako